အစားအစာထုပ်ပိုးမှုအတွက် Tin ကွန်တိန်နာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
နေအိမ် / သတင်း / စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးမှုအတွက်သံဖြူကွန်တိန်နာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးမှုအတွက်သံဗူးများ - အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်သတ္တုဘူးများဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်သမျှမှာအစားအစာထုပ်ပိုးရန်အတွက်သံဖြူကွန်တိန်နာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဆန့်ကျင်စွာအစပိုင်းတွင်အစားအစာထုပ်ပိုးရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်အခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာများကိုယခုမကြာခဏတွေ့လေ့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သံဖြူကွန်တိန်နာများကဲ့သို့ရေပန်းစားသည်မဟုတ်။
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနည်းတူအစားအစာထုပ်ပိုးမှုသည်လည်းအလှည့်အပြောင်းများစွာရှိသည်။ ဤအလှည့်အပြောင်းများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေသည့်အရာသို့ပုံသွင်းရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီတိုးတက်မှုထုပ်ပိုး၏အလုံးစုံထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ကိုပြု၏။
ခေတ်မီထုပ်ပိုးနည်းစနစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတိုးမြှင့်ထားသည်။ အစပိုင်း၌လူတို့တွင်နည်းပညာမရှိခဲ့သလိုဤခေတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်လည်းအကျွမ်းတဝင်မရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီအချိန်ကသီးသန့်အဘို့အဖြူထုပ်ပိုး။
အထက်တန်းလွှာလူတန်းစားများသာသတ္တုကွန်တိန်နာများတွင်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်အခြေအနေများယခုတိုးတက်လျက်ရှိသည် သငျသညျကိုအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာပရီမီယံလူတန်းစားသံဖြူကွန်တိန်နာခံစားနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်လက်ကားရောင်းသူများမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ပါကစျေးနှုန်းအလွန်ကျဆင်းသွားသည်။
Right after the American and the French revolutions, we saw the advancement in the modern packaging industry. The industry seemed to emerge like no other. The 19ကြိမ်မြောက် century offered advancement in terms of technology and equipment.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအသားလုပ်ငန်းသည်ယခုခေတ်ကဲ့သို့အရောင်တောက်ပပြီးခိုင်မာမှုမရှိပေ။ ဆန့်ကျင်တွင်အများအပြားအများအပြားတွင်းများနှင့်သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေများရှိခဲ့သည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင်သတင်းစာ Upton Sinclair သည်“ တောအုပ်” စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်ကအမဲသားထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။
၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အသားထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေရာတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ်သည်အသားစစ်ဆေးရေးအက်ဥပဒေ၊ နောက်ပိုင်းတွင်စင်ကြယ်သောအစားအစာလုပ်ရပ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအချက်အလက်သည်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကျောရိုးဖြစ်လာသည်။
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုလေးစားလာလာကြသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကြောင့် ၁၉၇၀ တွင် Earth Day စတင်ခဲ့သည်။ Earth Day ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူသည်အလွယ်တကူပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။
အမှန်မှာသူတို့သည်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်သတ္တုကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။ သူတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်ကတော့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနိယာမတွေကိုလိုက်နာဖို့ပဲ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပစ္စည်းများနည်းပါးစွာ အသုံးပြု၍ ပေါ့ပါးသောဘူးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်တွင်လူမီနီယံသံဗူးများသည်သူတို့၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်သက်တမ်းရှည်သောကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤသံဗူးပြန်သုံးအလွန်လွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုခုထုတ်လုပ်သူများအချိန်ကြာမြင့်စွာအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
ဖန်ထည်သည်ထုပ်ပိုးရန်အတွက်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အငွေ့နှင့်ဓာတ်ငွေ့များသို့သဘာဝရောက်အောင်မရောက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝကြားနေအောက်စီဂျင်အတားအဆီးဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာဖန်သည်အလွန်ကြီးမားသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်၌စွမ်းအင်များစွာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဆူး။
ဖန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာထုတ်ကုန်သည်အလွန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကွန်တိန်နာများကိုမည်သည့်ပြtroubleနာမှမပါဘဲထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။ အစားအစာလုပ်ငန်းတွင်နှစ်စဉ်ကွန်တိန်နာ ၇၅ ဘီလီယံခန့်အသုံးပြုပြီးအချိုရည်များ၊ ကလေးအစားအစာများ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်ဝိုင်များအပါအဝင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
နောက်တစ်ခု - Bespoke Tin Box ထုတ်လုပ်သူ - အရည်အသွေးမြင့် Tinning လုပ်ငန်းစဉ်